‘सेनालाई युद्धमा जानु र हामीलाई हिमाल चढ्नु उस्तै हो’ – Sourya Online
‘सेनालाई युद्धमा जानु र हामीलाई हिमाल चढ्नु उस्तै हो’
वर्षमा दुईपटक आँखा चिम्लेर आरोहण गर्न सक्छु
सौर्य अनलाइन २०७६ जेठ २३ गते ७:१५ मा प्रकाशित
२४औँ पटक सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका कामिरिता शेर्पाको आरोहण कति वेला रोकिनेको हो उनैलाई पनि प्रष्ट छैन । राज्यका तर्फबाट सहयोग भएमा वर्षमा दुईपटकसम्म सगरमाथा आरोण गर्न सक्ने उनको दाबी छ । अनुकूल वातावरण भएमा अझै १५ पटक आरोहण गर्न सक्ने उनले बताए । केही दिनअघि मात्रै एकै हप्तामा दुईपटक आरोहण गरेर अर्को कीर्तिमान राखेका शेर्पासँग आरोहणकै विषयमा सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादः
२४औँ पटक सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभयो । पहिलोपटकको आरोहण र पछिल्लो आरोहणमा के फरक पाउनुभयो ?
पहिलो आरोहण र पछिल्लो आरोहणमा धेरै फरक छ । पहिलोपटक आरोहण गर्दा अहिलेको जस्तो उपकरणहरू केही पनि पाइँदैन थियो । आवश्यक टेक्निकल समान केही थिएन । त्यत्तिकै आरोहण गर्नुपथ्र्यो । अहिले आरोहणमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको टेक्निकल सामान सहजै पाइन्छ । व्यावहारिक रूपमा पनि धेरै कुरा थाहा भयो ।
यो बीचमा अनुभव पनि धेरै हासिल गर्नुभयो, होइन ?
अनुभव भन्दा पनि समयअनुसार धेरै कुरा सिकियो । पहिला तालिमको व्यवस्था थिएन, पछि तालिम लिइयो । तीन वर्ष त मौसमसम्बन्धी मात्रै तालिम लिए । त्यस क्रममा माथि लेक लाग्यो वा मौसम बिग्रियो भने के गर्ने के औषधि प्रयोग गर्नेजस्ता तालिम पनि लिएँ । यसले पनि पछिल्ला दिनमा आरोहण सहज भयो ।
पहिलोपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
पहिलोपटक सन् १९९४ मा चढेको हो । खास केही सम्झिन्न, मात्रै आफूसँग गएको समूहलाई कसरी सफलतापूर्वक माथि पुर्याएर तलसम्म ल्याउने भन्ने सोचेँ । त्यो भन्दा बढी सोच्नै भ्याइनँ । आरोहीलाई माथि लानु मात्रै ठूलो कुरा होइन, उनीहरूलाई सफलतापूर्व तल ल्याउनु पनि हाम्रो दायित्व हो । त्यति मात्रै होइन विदेशबाट आएकालाई उनीहरूको देश फर्कदासम्म हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी आफू माथि पुग्नु मात्रै सफलता होइन आफूसँग गएको टिमलाई सफलतापूर्वक ल्याउनसक्नु नै सफलता हो । माथि जानुभन्दा तल आउन झन् जोखिम हुन्छ । विदेशीलाई तलसम्म ल्याउन सजिलो छैन । त्यसैले यात्रालाई कसरी सफल बनाउनेभन्दा अरू सोचिएन ।
पहिलोपटक कसको नेतृत्वमा जानुभयो ?
पहिलोपटक मेरो दाजुको नेतृत्वमा गएको थिएँ । त्यसपछि पनि केहीपटक दाजुको नेतृत्वमा नै गएँ । त्यस यता हरेक पटकको आरोहणमा मैले गाइडको साथै टोलीको नेतृत्व गर्दै आएको छु ।
पहिलो आरोण गर्दा युवा हुनुहुन्थ्यो जोश थियो । त्यति वेला सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न के कुराले आकर्षण गर्यो ?
१२ वर्षको उमेरदेखि विदेशी आरोहीको भरिया भने । २४ वर्षमा पहिलो आरोहण गरेको हुँ । हाम्रो गाउँ सोलखुम्बुको दुर्गममा पर्छ, थामे गाउँ । सगरमाथा हाम्रो जिल्लामा पर्ने प्रसिद्ध स्थान भए पनि गाउँ भने दुर्गममा पर्छ । गाउँमा स्कुल नभएकाले राम्रोसँग पढन पाएनौँ । चार कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुल थियो । त्यसैले हाम्रो समूहका कसैले पनि धेरै पढ्न पाएका छैनन् । सगरमाथा हाम्रो बाँच्ने आधार पनि हो । सुरुमा भरिया बनेर नै यस क्षेत्रमा लागेँ । तेन्जिङ शेर्पाले हिमाल चढेपछि अरू शेर्पाहरूले हिमाल चढ्न थाले । बुबा पनि यसै क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो । थामे गाउँबाट सगरमाथा चढ्ने पहिलो मेरो बुबा हो । तेन्जिङ शेर्पा र एड्मन हेलारीले आरोहण गर्दा तीन रुपैयाँ ज्यालामा बुबाले उहाँहरूको सामान बोकेर बेस क्याम्प पुर्याउनु भएको थियो ।
तेन्जिङ शेर्पालाई राज्यले केही नगरेका कारण भारतले किनेर लग्यो । राज्यले उनको कामको कदर गर्न सकेको भए उनी पनि यही हुन्थे होला नि । राज्यले दिनसक्ने सुविधा पनि रोकेको छ । समयमा प्रमाणपत्रसम्म दिँदैन । त्यहाँ खटिने कर्मचारीका कारण पनि हामीले दुःख पाएका छौँ
पहिलोपटक चढेपछि पुनः पटकपटक किन चढ्नुभयो ?
हरेक काममा मान्छेको जिम्मेवारी हुन्छ । आरोहण मेरो कामजस्तै हो । रेकर्ड बनाउने कुरा थिएन । सुरुमा विदेशीको समान बोकेर गयौँ, उनीहरूको सहयोगी बन्यौँ । अहिले मेरो भूमिमा गाइडका साथै आरोहणमा जाने विदेशीको नेतृत्व गर्नु पनि हो । मेरो काम रेकर्ड बढाउन वा राख्नका लागि मात्रै होइन आफूले लगेको टिमका मान्छेलाई कसरी सफलतापूर्वक आरोहण गराएर फर्काउने पनि हो । हाम्रो सगरमाथा चढ्न करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर आउने विदेशीलाई सफलतापूर्वक आरोण गराउन सकियो भने अर्कोपटक उसले अरू दुई जना ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । यसले राज्यलाई फाइदा दिन्छ भने हामीले पनि एकप्रकारको काम पाउँछौँ ।
हाम्रो उद्देश्य आफू मात्रै सफल हुँ भन्ने होइन, हाम्रो कामले राज्यले पनि केही आम्दानी गरोस् भन्ने हो । एउटा विदेशी आरोहणमा आउँदा रोयल्टी मात्रै तिर्दैन, उसले होटलमा खान्छ बस्छ, यहाँको हवाइ वा बस प्रयोग गर्छ । त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ । नेपाललाई थोरै विदेशीले मात्रै चिन्छ । सगरमाथा र शेर्पाको देशभन्दा सबैले चिन्छन् । त्यसैले सगरमाथा हाम्रो पहिचान पनि हो । यसलाई राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ ।
कति समय ट्रेकिङ गाइड बनेपछि सगरमाथा चढ्ने आँट गर्नुभयो ?
१२ वर्षको उमेरदेखि भरियाको रूपमा काम गरेँ । याकलाई भारी बोकाउने भएकाले मान्छेलाई पनि याक ड्राइभर भन्छन् । मैले पनि याक ड्राइभरको रूपमा धेरै भारी बोक्ने काम गरेँ । त्यसपछि सामान्य ट्रेकिङको काम गरेँ । ५-६ हजारको उचाइमा धेरैपटक गएँ । बेस क्याम्प त कतिपटक गएँ गएँ सम्झेर साध्य छैन । ट्रेकिङ गाइड बेसक्याम्पसम्म मात्रै जान पाउँछन् । त्यसरी कामका सिलसिलामा सगरमाथा चढियो ।
तपाईंका लागि सगरमाथाको चुचुरो पुग्नु सामान्य छ हो ?
सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु कसैका लागि पनि सामान्य होइन । म धेरै गएँ भनेर मान्छेलाई सामान्य लाग्न सक्छ । हिमाल चढ्नका लागि लक्षता चाहिन्छ, देवीदेवताले पनि साथ दिनुपर्छ । हिमाल चढ्नु अति नै जोखिम र खतरा छ । मेरो २४औँ पटकसम्मको यात्रामा कुनै पनि कठिनाइ वा चोटपटक केही भएको छैन । म देवीलाई धेरै मान्छु । देवीको पूजा गरेर जाने गरेको छु । सगरमाथामा गएर रेकर्ड राख्ने धेरैको चाहना हुन्छ ।
तर, म रेकर्ड राख्नका लागि मात्रै होइन यो राष्ट्रका लागि पनि आरोहणको आवश्यकता छ भन्ने ठानेर गरेको छु । हाम्रो कारणले जति धेरै विदेशीलाई आकर्षण गर्न सक्यो राज्यलाई त्यति नै धेरै फाइदा हुन्छ । तर, राज्यले यस क्षेत्रमा केही पनि हेरेको छैन । म मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा म भन्दा पहिला पनि धेरैले योगदान गर्नुभएको छ । तेन्जिङ शेर्पालाई राज्यले केही नगरेका कारण भारतले किनेर लग्यो । राज्यले उनको कामको कदर गर्न सकेको भए उनी पनि यही हुन्थे होला नि । राज्यले दिनसक्ने सुविधा पनि रोकेको छ । समयमा प्रमाणपत्रसम्म दिँदैन । त्यहाँ खटिने कर्मचारीका कारण पनि हामीले दुःख पाएका छौँ ।
हाम्रो उद्देश्य आफू मात्रै सफल हुँ भन्ने होइन, हाम्रो कामले राज्यले पनि केही आम्दानी गरोस् भन्ने हो । एउटा विदेशी आरोहणमा आउँदा रोयल्टी मात्रै तिर्दैन, उसले होटलमा खान्छ बस्छ, यहाँको हवाइ वा बस प्रयोग गर्छ । त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ
यत्तिकापटक आरोहण गर्दा कहिलेकाहीँ अब त सकिँदैन गाह्रो होला भन्ने मनमा आयो कि आएन ?
एभरेस्ट ओरोहणमा मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कठिनाइ भएन । मेरो आरोहण २४औँ भने पनि त्यो भन्दा बढी गएँ रेकर्ड भएन । मैले यात्रामा कठिनाइ झेल्ने वा अब त आउँदिनँ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन । पहिलापहिला आरोहण गर्दा कुनै उपकरण हुँदैन थियो । आकाशको तारा हेरेको भरमा जानुपथ्र्यो । अहिले त मौसम कस्तो छ, हावाहुरी आउने, हिउँ पर्ने वा बादल लाग्ने सम्भावना छ छैन भन्ने बारेमा विभिन्न देशबाट जानकारी आउँछ । के कस्तो छ भनेर त्यसैको आधारमा माथि जाने हो ।
पहिला आरोहणमा जाने वेलामा बुढाबुढीले भन्थे, तारा हेरेर जानु हप्ता दिनसम्मको मौसम विचार गर्नु । आकाशमा तारा देखिए मौसम राम्रो मानिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । सबै कुराको जानकारी पाइन्छ । ती अफ्ठ्यारा दिनमा त आत्तिएन । अहिले त सगरमाथा आरोहणमा धेरै कुराको सहयोग छ ।
चचुरोमा पुगेपछि कोसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ ?
जाने सबैसँग वाकीटकी (सञ्चार सेट) हुन्छ माथि पुग्ने बित्तिकै ‘टपमा पुगेँ’ भनेर बेसक्याम्पलाई जानकारी गराउँछौँ । हामी २४सै घण्टा बेसक्याम्पसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ । त्यसपछि बेसक्याम्पको सहयोगमा घर परिवारसँग सम्पर्क हुन्छ । योपटक १५ तारिकमा माथिबाटै घरमा कुरा भयो । घरमा जानकारी गराएँ माथि पुगेँ भनेर । त्यसपछि तल झर्दा पनि जानकारी गराउँदै झर्ने हो कहाँ पुगियो भनेर ।
चुचोरोमा सबैभन्दा बढी समय कति बिताउनुभएको छ ?
सबैभन्दा बढी समय गतवर्ष २२औँ पटकको आरोहणमा एक घण्टा माथि बिताए । सँगै गएको टिम माथि उक्लँदै थियो उनीहरूलाई पनि कुरो । त्यो वेला मौसम एकदम राम्रो थियो । हावा कत्ति पनि चलेको थिएन । फोटो खिचेर बसेँ । त्यो पटक टिममा सात जना थियौँ । यसपाली पहिलोपटक आधा घण्टा बिताएँ पछिल्लोपटक २० मिनेट जति बिताए । पछिल्लोपटक हावा चलेकोले धेरै समय बिताइनँ ।
यति धेरै आरोहण गर्नुभयो परिवारले अब भयो नजानु भन्दैनन् ?
हिमाल जाने कसैलाई पनि परिवारले जाउ भन्दैन । नगए हुन्थ्यो भन्ने परिवारको चाहना हुन्छ । तर, पनि हामी जान्छौँ । सेनालाई युद्धमा जानु र हामीले हिमाल चढ्नु उस्तै हो । सेनाका परिवारले युद्धमा नगए हुन्थ्यो भन्छन् तर, जानै पर्छ । हिमाल चढ्नु जोखिम छ, त्यो परिवारलाई थाहा छ र उनीहरूलाई चिन्ता लाग्छ त्यो स्वभाविक हो ।
अबको आरोहण कहिले हुन्छ ?
अबको आरोण आउने वर्ष गर्छु । ५० वर्षको उमेरभित्रै २५ पटक पु¥याउनेछु । यो मेरो पहिलाकै अठोट हो ।
त्यसपछि चढ्नु हुन्न ?
त्यसपछि चढ्ने वा नचढ्ने अहिले नै भन्न सक्दिनँ । मेरो कम्पनीले के भन्छ त्यसैमा भर पर्छ । कम्पनीमा कन्ट्रयाक गरेको हुन्छ । मेरो कन्ट्रयाक अब दुई वर्ष बाँकी छ । त्यसपछि कन्ट्रयाक थपिन पनि सक्छ, नथपिन पनि सक्छ । त्यसपछि म चढ्न पनि सक्छु । कम्पनीले जा भनेको खण्डमा म फेरि पनि आरोहणमा जान सक्छु । २५ पटक आरोहण गरेर सन्यास लिने चाहिँ मेरो चाहना हो तर, त्यो नहुन पनि सक्छ ।
तपाईंले सगरमाथा आरोहणमा बनाएको रेकर्ड तपाईंकै जीवनकालमा अरू कसैले तोड्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म त मेरो रेकर्ड अरूले कसैले ब्रेक गरुन् भन्ने चाहन्छु । त्यो भनेको यो क्षेत्रमा विकास हुनु हो । अरूले पनि यस क्षेत्रका लागि केही गर्नुपर्छ त्यो भनेको धेरै आरोहण गर्नु हो । मेरो रेकर्ड ब्रेक गर्नु भनेको सगरमाथामा धेरैपटक आरोही पुग्नु हो, त्यो हुनपर्छ । यसले व्यक्तिको मात्रै कुरा हुँदैन राज्यको अर्थतन्त्र र पर्यटन विकासको पनि फाइदा पुग्छ । जहाँसम्म मेरो आरोहरणको कुरा हो म अझै १५-१६ पटक आरोहण गर्नसक्छु । वर्षमा दुईपटक सहजै आँखा चिम्लेर आरोहण गर्न सक्छु ।
यति धेरै आत्मविश्वास हुनका कारण के हो ?
लामो यात्राले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । कस्तो ठाउँमा खुट्टा टेक्दा के हुन्छ । कहाँ कसरी हिँड्नु पर्छ भन्ने सबै बुझेँ । बाटोको पाइला पाइला जानेको छु, कहाँ जोखिम छ सबै थाहा छ । त्यसैले अब मेरा लागि सगरमाथाको आरोहण गाह्रो छैन । तर, त्यसका लागि वातावरण बन्नुपर्छ ।
यति लामो यात्रामा अहिलेसम्म भोग्नुभएको समस्या के हो ?
यस क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छ । राज्यले यो क्षेत्रमा लागेका आरोहीलाई विशेष भक्ता दिनुपर्छ । हामीले देशका लागि ज्यान जोखिममा राखेर आरोहण गर्छौं । तर, राज्यका तर्फबाट कुनै सेवा सुविधा छैन । यदि राज्यले यो क्षेत्रलाई बेवास्था गर्ने हो भने अबको १० वर्षपछि सगरमाथा चढ्ने शेर्पा पाउन मुस्किल हुन्छ । सगरमाथाको आकर्षण र शेर्पाको बहादुरी देखाएर मात्रै हुँदैन । राज्यको काम शेर्पाले विदेशीलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याइदिएको रोयल्टी खाने मात्रै होइन । यस क्षेत्रमा लागेकाहरू पनि केही हुन् भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ ।
‘राजस्व छल्ने साना ठूला कसैलाई छाडिन्न’
नवसंस्कृतिको रूपरेखा सजिलै कोरिँदैन
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ
संविधान संशोधनको एजेन्डा सेलाएको छैन
वन समृद्धिको आधार हो
पर्यटकको सुविधा र सन्तुष्टि नै हाम्रो उद्देश्य
यस्तो रह्यो तीन नेताको छलफल
साझा प्रयासबाटै मुलुकको समृद्धिः दाहाल
गन्तव्य विस्तार गर्दै बुद्ध एयर
एमसिसी परिमार्जन हुन्छः गृहमन्त्री थापा
बाचकका कारण महायज्ञमा गएनन उपराष्ट्रपति
न्युजिल्यान्डमा भारतको सानदार जित
चितवन प्रिमियर लिग माघ १७ देखि
नेपाल लाइफद्धारा मृत्यु दावी रकम भुक्तानी
मिर्मिरेको अध्यक्षमा बोहरा
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता
कमल भूसालको ‘गाइलाई चराउँदै’ बजारमा
प्रहरी महानिरक्षक खनालद्धारा भवन उद्घाटन